Ivermectin 1% + Closantel 10% Ọgwụ - China Chongqing Fangtong
Ivermectin 1% + Closantel 10% Ọgwụ
Ọdịdị Ọ bụ ihe na amba ka brownish odo doro anya mmiri mmiri. Mejupụtara ọ bụla ml nwere: Ivermectin 10mg, Closantel: 100mg. Ngosi N'ihi na ọgwụgwọ nke mbuaha trematode (fluke) na nematode ma ọ bụ arthropod infestations ruru ka eriri afọ roundworms, lungworms, eyeworms, warbles, mites na Igwu ehi. Eriri afọ roundworms Ostertagia ostertagi (gụnyere eru larval nkebi), Ostertagia lyrata (okenye), Haemonchus placei (okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Trichostrongylus axei (okenye na ...
Ọ bụ ihe na amba ka brownish odo doro anya mmiri mmiri.
Onye ọ bụla ml nwere: Ivermectin 10mg, Closantel: 100mg.
Maka ọgwụgwọ nke mbuaha trematode (fluke) na nematode ma ọ bụ arthropod infestations ruru ka eriri afọ roundworms, lungworms, eyeworms, warbles, mites na Igwu ehi.
eriri afọ roundworms
Ostertagia ostertagi (gụnyere eru larval nkebi), Ostertagia lyrata (okenye), Haemonchus placei (okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Trichostrongylus axei (okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Trichostrongylus colubriformis (okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Cooperia oncophora (okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Cooperia punctata ( okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Cooperia pectinata (okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Oesophagostomum radiatum (okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Nematodirus helvetianus (okenye), Nematodirus spathiger (okenye), Strongyloides papillosus (okenye), Bunostomum phlebotomum (okenye na ọmụmụ akabeghị aka), Toxocara vitulorum ( okenye), Trichuris spp.
Dictyocaulus viviparus (okenye na 4th ogbo larvae).
Imeju Fluke (trematodes)
Ọgwụgwọ nke fluke na 12 izu (tozuru okè)> 99% nrụpụta.
Ọgwụgwọ nke fluke na 9 izu (mbubreyo ọmụmụ akabeghị)> 90% nrụpụta.
Ehi grubs (parasitic nkebi)
IVERTEL bụghị maka igba ogwu n'akwara ma ọ bụ intramuscular were.
Avermectins ghara ọma nakweere niile na-abụghị lekwasịrị umu (ikpe nke ekweghị ibe nọrọ na-egbu egbu na ya pụta
na-akọ na na nkịta karịsịa Collies, Bobtails, Old English Sheepdogs na yiri udiri anumanu ma ọ bụ obe,
na-na mbe / mbekwu).
Unu na-eji na ikpe nke mara hypersensitivity na-arụsi ọrụ ike Efrata.
Ekwela dọọ concomitantly na chlorinated ogige. Mmetụta nke Geba agonists na-amụba site ivermectin.
AKPAN anya maka ojiji
Doses nke karịa 10ml ga-agbara abụọ dị iche iche na saịtị na iji belata-adịru erughị ala ma ọ bụ mmeghachi omume na ọgwụ na saịtị.
Ọ bụghị ihe amamihe na-dọọ ngwaahịa mgbe Hypoderma lineatum larvae na-metụtara nanị akụkụ ụfọdụ na periaesophagic mpaghara, ma ọ bụ mgbe Hypoderma bovis larvae na-dị na spinal kanaal. Chọọnụ ọkachamara ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ na ndụmọdụ iji chọpụta ndị kasị mma oge nke iji.
Onunu ogwu ochichi ụzọ
1 ml kwa 50 n'arọ. ahu arọ, Ẹkot 200 mcg / n'arọ Ivermectin na 2 mg / n'arọ Closantel.
Single doses nke 4.0 mg / n'arọ ivermectin (20 ugboro na-atụ aro usoro onunu ogwu) ndinọ subcutaneously, ịkpata ataxia na ịda mbà n'obi. Ọ dịghị ọgwụ e kwuru. Symptomatic ọgwụgwọ pụrụ ịba uru.
Ịrịba ama overdosage nke Closantel pụrụ ịgụnye ọnwụ nke agụụ, na-ebelata ọhụụ, omume rụrụ faeces na ụba ugboro ole nke defaecation. High doses nwere ike ime ka isi, hyperventilation, hyperthermia, n'ozuzu adịghị ike, inco-emume, ụfụ, tachycardia na na oké ikpe ọnwụ. Ọgwụgwọ nke overdosage bụ symptomatic dị ka ọ ngwọta e kwuru.
ndọrọ ego N'OGE
Anụ: 35 ụbọchị.
Ọ bụghị kwere maka ojiji na anu-ulo-amị mmiri ara ehi maka oriri.
Unu na-eji na-abụghị lactating Mmiri ara ehi ehi gụnyere ime heifers nke na-bu n'obi na-emepụta mmiri ara ehi
maka oriri n'ime ụbọchị 60 nke na-atụ anya parturition.
Unu na-eji ihe ọ bụla closantel-nwere ngwaahịa n'oge 35 ụbọchị ndọrọ ego oge.
Na a 50ml ma ọ bụ 100ml karama.
Echekwara na a jụụ, akọrọ na n'ebe gbara ọchịchịrị.